Ogaden News Agency (ONA) – Shir laba maalmood socday oo Maamulka iyo Hawl-wadeenka Bariga Afrika ay isugu yimaadeen
Shir laba maalmood socday oo Maamulka iyo Hawl-wadeenka Bariga Afrika ay isugu yimaadeen
Posted by ONA Admin	/ October 29, 2013
Shirkan oo ay kasoo qaby galeen Gudoomiyayaasha Faracyada, howl wadeeno JWXO iyo isu duwaha jaaliyadaha Ogaadeeniya ee Bariga Afrika ayaa ka dhacay xerada qaxootiga Ifo ee deegaanka dhadhaab ee dalkaKenya. Sidoo kale waxaa shirka ka soo qayb galay Gudiga culimada Ogaadeeniya ee Dhadhaab, Gudiga Qaxootiga Ogaadeeniya ee Dhadhaab iyo xidhiidhiyaha ururka OYSU ee Bariga Afrika.
Shirka oo socday mudo laba maalmood ah (26-27 October 2013) ayaa waxaa si rasmi ah ufuray isu duwaha Jaaliyadaha Ogaadeeniya ee Bariga Afrika Mudane Axmed-naasir Cali. Warbixino dhaadheer oo waafi ah iyo kala xog-qaadasho kadib waxay masuuliyiintii iyo howl wadeenadii shirka kasoo qaby galay guda galeen ka dooditaanka qodobada shirka horyaalay.
Waxay ugu horeen masuuliyiinta ka kala yimid maamulada jaaliyaduhu soo gudbiyeen warbixintii sanadkan ee dhinacyada Abaabulka-bulshada, Dhaqaalaha, Siyaasada iyo Amniga kuwaasoo ahaa kuwo ku qotamey ama ka turjumayey marxalada guud ee halganka iyo tan gaar ahaaneed ee Bariga Afrika. Mudadii uu shirku socday waxay masuuliyiinta Faracyada jaaliyada Afrikada Bari iyo howl wadeenadaJWXO isla qireen in uu kor u kac sameeyay halganku mudadii ay xilka hayeen, dhammaan qorshayawgii la tusmeeyayna ay u fuleen sidii loogu talagay.
Waxaa sidoo kale shirka ka soo jeediyay warbixin qiimo gal ah gudoomiyaha gudida qaxootiga ee Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya mudane Daahir Maxamed Cali, wuxuuna diirada saaray waxyaabihii ugu qabsoomay mudadii u danbaysay, taasoo hididiilo galisay dhamaan martidii shirka fadhiday bogaadisayna waxqabadka rasmiga ah iyo guulaha ay ku talaabsatay gudidani.
Masuuliyiintii iyo howlwadeenadii shirka kasoo qayb galay waxay dajieyeen qorsha sanadka soosocda iyagoo kusaleeyey qaab cilmiyaysan oo ku qotoma waaya arignimada qorshayaashii sanadkii hore iyo marxalada cusub ee Geeska Afrika
Shirkan oo ahaa mid muhiim ah kuna soo beegmay wakhti loo baahnaa ayaa waxaa kasoo baxay Go’aamo dhaxal gal ah oo lajaan qaadi doona marxada hadda uu galay halganku oo ah mid ubaan howl karnimo dheeri ah.
Shirku waxa uu bogaadiyey Ciidanaka Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya iyo masuuliyiintiisa oo kaalintoodii kaga aadanayd xoraynta Ogaadeeniya kasoo dhalaalay cidhiidhina galayey cadowga ummada Ogaadeeniya una diiday joog iyo jiif
Sidoo kale shirku waxa uu cambaareeyey guud ahaan gumaysiga iyo gancan yarayaashiisu dhibka ay ku hayaan shacabka Ogaadeeniya,